Google dia hanala ny fanohanana ny Exchange ao amin'ny kaonty Gmail | Vaovao IPhone
Tsy isalasalana fa herinandro maro be izy ireo no niasa tao Mountain View, manome antsika fanavaozana marobe ny Fampiharana Google ho an'ny iOS ary na dia ny fanombohana andrasana amin'ny Google Maps ho an'ny iPhone. Saingy, tsy ny zava-drehetra no mety ho vaovao tsara, ary ny orinasan'ny motera fikarohana dia nanambara tamin'ny alàlan'ny bilaoginy ofisialy fa hanao izy ireo fanadiovana ririnina, miaraka amin'ny inona hitsahatra fampiharana na serivisy sasantsasany amin'ny herinandro ho avy.
Tsy ho tantara fandrakofana izany raha tsy noho ny zava-misy fa anisan'ireo serivisy ireo Google dia nanapa-kevitra ny hisoratra anarana dia ny fanohanana ny protokol Microsoft Exchange ho an'ny Google Sync dia atao manaraka 30 tamin'ny Janoary. Raha manontany tena ianao hoe inona no mety ho fiantraikany amin'ny mpampiasa iPad dia avelao aho hiteny aminao matetika, satria ity protokolola ity no ampiasain'ny ankamaroan'ny mpampiasa iOS hisolo toerana ny kaontinay. Gmail miaraka amin'ny fampandrenesana fanosehana ho an'ny mailaka, ny fifandraisana ary ny kalandrie.
Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa Gmail rehetra amin'ny iPhone na iPad dia tsy maintsy manamboatra ny kaontiny ankehitriny toy ny IMAP, izay fomba ofisialy atolotry ny iOS antsika, izay mety hahatonga antsika tsy maintsy hanao izany mamelombelona isaky ny fotoana voafaritra ny kaontinay misintona mailaka, miaraka amin'ny fahasahiranana na fiasa kely mety hidika izany. Ireo kaonty miasa amin'izao fotoana izao dia hiasa tsy misy olana, toy ny an'ny Google Apps, na izany aza, raha te-hisoratra anarana fitaovana vaovao ianao dia tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny IMAP (ary raha manova ilay fitaovana amin'ny kaonty iray ihany aho, hijanona ve izany mavitrika? tsy dia mazava ny momba azy).
Soa ihany ny farany Fampivoarana Gmail ho an'ny iOS Raha misy fampandrenesana fanosehana, fa ahoana kosa ny fifandraisana sy ny kalandrie? Soa ihany raha ny ahy, efa ela aho no nijanona tsy nifanaraka tamin'ny kalandrie sy ny fifandraisako tamin'ny kaonty Gmail nataoko, satria nafindraiko tany amin'ny iCloud ny zava-drehetra ka tsy hisy fiantraikany amiko io lafiny io, fa toa ny maro, ny zava-misy fa tsy Manana fanelingelenana kely intsony ny fampandrenesana Push ao amin'ny mpanjifa mailaka teratany, tsy zatra mampiasa ny rindranasan'ny Gmail aho ary tena ilaina maika ny maika rehefa mahazo mailaka.
Tsy mino aho fa mampiditra fomba antonony na maharitra Apple hamahana ity olana ity, mety hiatrika valifaty nataon'i Google ve isika na fomba hitondrana mpampiasa bebe kokoa amin'ny mailaka ofisialiny? Ankehitriny dia tsy maintsy zatra manana fampandrenesana fotsiny isika isaky ny 15 minitra na ampiasao fampiharana hafa bebe kokoa.
Fanazavana fanampiny - Navaozina ny Gmail for iOS, Tonga ihany ny YouTube ho an'ny iPad
Loharano - Google
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Google dia hanaisotra ny fanohanana ny Exchange ao amin'ny kaonty Gmail-ny (fampandrenesana famporisihana veloma amin'ny iOS)
Jojojo mandehandeha amin'ireo mpampiasa izay ho resy ary izaho no voalohany, tsy afaka miaraka amin'ny mailaka amin'ny findaiko aho raha tsy misy push ... veloma google
Francisco Rodas Figueroa dia hoy izy:
Tsy dia henjana araka ny tokony ho izy ny vaovao. Raha milaza tsara ny tenanao ianao dia hanafoana ny serivisy ny google, eny, saingy ho an'ireo mpampiasa efa manana ny rafitra mavitrika dia hitohy ny asany. Ity fampiatoana serivisy ity dia tsy ho an'ny mpampiasa vaovao ihany
Valiny tamin'i Francisco Rodas Figueroa
Heveriko fa te hiteny ianao hoe hitohy ny fanohanana fa ho an'ny kaonty Google Apps, na dia diso manonona azy aza aho dia heveriko fa mampiasa kaonty Gmail mahazatra sy mahazatra ny ankamaroany.
Ohatra: manana iPhone namboarina miaraka amin'ireo kaonty gmail aho ho takalony; Raha aorian'ny 30 Janoary dia mividy iPad aho, amin'ny fitaovana izay dia TSY ho afaka hamboarina ireo kaonty fifanakalozana ireo aho?
Ramses Herrero Franco dia hoy izy:
Ka tsy misy olana, satria manana iPhone aho dia nampiasa ny fikirakirako Gmail foana aho izay tonga amin'ny toerana misy anao ary tonga foana ny mailaka isan'ora.
Valiny tamin'i Ramses Herrero Franco
Asa inona…. Manana ny kaonty Gmail misy ahy aho, ao anatin'izany ireo any am-piasana, ary tsy afaka tsy ho ao anaty Push aho… ilaina amin'ny asako izany. Asa kely, raha tsy hiteny afa-tsy izay ... Misaotra an'i Google tamin'ny nanesorany anay kely kokoa ...
H. Cabrera dia hoy izy:
Raha jerena izany dia tsy misy sisa tavela afa-tsy ny hamindra ny zava-drehetra any amin'ny iCloud ary koa handefa mailaka GMail amin'ny iCloud mba hananana fampandrenesana fanosehana. Heveriko fa tsy misy safidy hafa.
Valiny tamin'i H. Cabrera
Araka ny fampahalalana kely nomen'ny Google hatreto, ny serivisy dia hitohy hiasa ho an'ny kaonty mavitrika amin'ny fitaovantsika sy ho an'ny kaonty Google App ho an'ny orinasa, governemanta ary ny oniversite, mila miandry isika raha hahomby izany rehefa miova isika fitaovana (raha ny amiko dia hividy iPhone 5 aho hampiatoana ny iPhone 4 nataoko taloha). Ka raha manohy amin'ny fitaovana mitovy amin'izany ianao amin'izao fotoana izao dia tsy mila miahiahy.
Tamin'ny 18 martsa 12, tamin'ny 2012:12 hariva, nanoratra i "Disqus":
Nijanona tsy nifanerasera tamin'i icloud aho tamin'ny fotoana nialako tamin'ny ios 4 ka hatramin'ny 5 ary hitako fa satria tsy vita tsara ny fanavaozana dia very ny ampahany betsaka amin'ny fifandraisako, izany hoe ho ahy dia tsy zava-dehibe ny fampandrenesana fanosehana fa ny fampifanarahana ny fifandraisana. ary ny tetiandro miaraka amin'ny gmail, izay azo antoka ary tsy manome olana amin'ny fampifanarahana
Bubble Galaxy, manipy baolina miloko ary mifaninana mba ho tsara indrindra
Fikirakirana fanidiana: hidio ny efijirinao (Cydia)